ကျွန်​ုပ်​တို့ MobileLegends Player ​တွေရဲ့ မာတာမိခင်​ကြီးရဲ့ အ​ကြောင်​းပါ
Thet Naing Swe (10/11/2017)
ကျွန်​ုပ်​တို့ MobileLegends Player ​တွေရဲ့ မာတာမိခင်​ကြီးရဲ့ အ​ကြောင်​းပါ.... :3
Layla ဟာ Malefic Energy (အန္တရာယ်များသော စွမ်းအင်တစ်မျျိုး) လို့ခေါ်တဲ့ စွမ်းအင်တွေပြည့်နက်နေတဲ့ ကမ႓ာမှာ နေထိုင်ခဲ့တယ်...
အဲဒီဆိုးရွားတဲ့ စွမ်းအင်တွေဟာ layla နေထိုင်တဲ့ ကမ႓ာပေါ်က လူရိုင်းတွေနဲ့ သက်ရှိမှန်သမျှကို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စေတဲ့ အကြောင်းပြချက် (သက်သေ) တစ်ခုပါပဲ....
အဲဒီစွမ်းအင်တွေဟာ သူမရဲ့ ကမ႓ာပေါ်မှာရှိသမျှ အရာအားလုံးကို ချေမှုန်းဖျက်ဆီးပစ်နေသလိုပါပဲ... တစ်နေ့မှာတော့ Layla ရဲ့အဖေဟာ မှော်သံမဏိတွေကို သေနတ်ပုံစံ ပုံသွင်းပြီး Malefic Energy ကိုဘယ်လို ထိန်းချုပ်ရမလဲ ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်...
ကံဆိုးချင်တော့ သေနတ်ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း စွမ်းအင်တွေကို လိုအပ်တာထက်ပိုသုံးခဲ့မိလို့ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်... ဒါပေမယ့်လည်း သေနတ်ကို ပီးစီးအောင် ပြုလုပ်ပြီး Layla ကိုပေးအပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်...
Laylaဟာ Malefic Energy သေနတ်ကို ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရမှာတောင် တွေဝေနေခဲ့ပါတော့တယ်...
Movement Speed. >240
Physical Attack. >118
Attack Speed. >0.85
HP Regen. >27
Mana Regen. >14
Passive ( Malefic Gun )
အဝေးကပစ်လေ သူမရဲ့ basic attack နဲ့ skill damage ကြမ်းလေပါ.... level အလိုက် အကွာအဝေး 100% ကနေ 130% အထိ ဝေးလာမှာပါ....
Skill 1 (Malefic Bomb)
Malefic ဗုံးနဲ့ ပစ်လွတ်လိုက်တာပါ... ပစ်လိုက်တဲ့ လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ ပထမဆုံး ရန်သူကိုထိမှာပါ.. physical damage 200 ထိမှာပါ...
Cooldown 3.5 စက္ကန့်ရှိပါတယ်...
Skill2(Void Projectile)
Energy ball လို့ခေါ်တဲ့ စွမ်းအားလုံးလေး ပစ်လွတ်လိုက်တာပါ... ရန်သူ(minion အပါဝင်) Target နဲ့ အနီးနားက ရန်သူတွေကို physical damage 170 ထိမှာပါ... ရန်သူတွေရဲ့ movement speed 60% 2စက္ကန့် နှေးသွားစေပါတယ်... အဲ့ဒီ skill သုံးတဲ့ အကွာအဝေးဟာ skill ရဲ့ level အပေါ်မူတည်ပြီး တိုးလာမှာပါ...
Cooldown 7.5 စက္ကန့်ရှိပါတယ်..
Ultimate Skill (Destruction Rush)
လေဆာတန်းလိုမျိုး ပစ်လိုက်တာပါ.... လေဆာတန်းတစ်လျှောက် ထိတဲ့ရန်သူဟာ physical damage 500 ထိမှာဖြစ်ပါတယ်... ဘဒိုတို့ ဆစ်တို့ သိပ်မသိတဲ့ ult ရဲ့ အားသာချက် တစ်ခုရှိပါသေးတယ်... Ult skill level တစ်ဆင့်တိုးတိုင်း သူမရဲ့ basic attack အကွာဝေး 0.4 ပေါင်းပေးတယ်ဆိုတာပါပဲ... ဆိုလိုတာက ult မှာ level သုံးဆင့်ရှိတယ်... သုံးဆင့်လုံးယူပြီးသွားရင် attack rage 1.2 ပေါင်းပေးတယ်... အဲဒီတော့ tower တွေကို အပြင်ဘက်ကနေတောင် ပစ်လို့ရတာ တွေ့ကြမှာပါ...
Cooldown 37 စက္ကန်ရှိပါတယ်....
≥Ö‿Ö≤ How To Play ≥Ö‿Ö≤
Layla ဟာ free ပေးတဲ့ hero ဖြစ်ပေမယ့် တော်တော်လေး ကြမ်းတာ လူကြီးမင်းတို့ အသိပါ.. Item စုံသွားလို့ကတော့ skill မသုံးပဲနဲတောင် basic attack က လန်ထွက်နေပါတယ် Layla ဟာ hero တွေထဲမှာ attack rage အဝေးဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်.. တစ်ခါတစ်လေ ဘယ်ကပစ်နေမှန်းတောင်မသိပါဘူး... Battle ဆိုင်ရင် Tank/Fighter တွေနောက်ကဖြစ်ဖြစ် ခြုံထဲမှာဖြစ်ဖြစ် နေရာယူထားပါ... by one တွေ့ရင် Ult အရင်သုံးပြီး ကြိုက်သလို ဆော့နိူင်ပေမယ့် battle ဆိူင်ရင်တော့ ult ကို အရင် မသုံးလိုက်ပါနဲ့... တစ်ဘက်ရန်သူတွေကို ကိုယ် ဘယ်နေရာမှရှိနေလဲဆိုတာ ပြောပြလိုက်သလိုပါပဲ.... တစ်ဖက်ရန်သူတွေရဲ့ Assassin တွေကို အထူး သတိထားနေပါ... Assassin တွေသာ မိမိဆီဝင်လာခဲ့ရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ ပြေးမှာလား ဘာspell သုံးရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြိုတင်တွေးထားပါ... Marksmae ဟာ battle အတွက် damage အများဆုံး ထုတ်ပေးနိုင်တာမို့ ပထမဆုံး မသေသွားဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်.. Battle spell ကတော့ Assassin တွေကို ကြောက်ရင် filcker နဲ့သွားပါ... Tank နောက်က ထိုင်ဆော်မယ်လို့ စိတ်ကူးရင် Inspire နဲ့ သွားပါ...